UMKHANDLU NEZINHLELO ZOKUTHUTHUKISA UMPHAKATHI – Sivubela intuthuko Newspaper
UMKHANDLU NEZINHLELO ZOKUTHUTHUKISA UMPHAKATHI
uMeya woMkhandlu wase Mandeni, uKhansela Thabani ogcizelela ukubaluleka kokuba zenziwe ngcono izimpilo zabantu bakule ndawo
UMKHANDLU waseMandeni oholwa nguKhansela Thabani Mdlalose usingathe ngempumelelo ukubuyekezwa kwenqubo ewumthetho sisekelo okuhloswe ngazo ukuqinisekisa ukusheshiswa kokufinyeleliswa kwezinsiza kumalunga omphakathi.
Lo Mkhandlu ubukade uhlanganele eBandla Hotel futhi uhlale izinsuku ezintathu ezigcwele. Phakathi kokunye okuhlosile kuhlalukile ukuthi ukwenza ngcono ikusasa labantu baseMandeni ukuze lizoqhakaza.
Kuzokhumbuleka ukuthi iMeya yalo Mkhandlu uKhansela Mdlalose uhleli elishumayela ivangeli lokubaluleka kokuphuculwa kwezimpilo zabantu bakule ndawo.
Kulezi zingxoxo kuphindwe kwacutshungulwa kabanzi ukuthi yini engenziwa ngenhloso yokuqiniskisa ukuthi uyaphumelela umbono waseMandeni wokuthi ube uMkhandlu owethenjwa ngabantu, ube nomnotho ozinzile ngo-2030.
Ngesikhathi ekhuluma kuvulwa lo mmbuthano uMeya uKhansela Mdlalose ukhulume kabanzi ngokubaluleka kokuba kuthuthukiswe izimpilo zabantu baseMandeni kanye nokubeka umphakathi eqhulwini kuzona zonke izinhlelo zalo Mkhandlu.
“Umsebenzi omkhulu esibhekene nawo ukuthi siqinisekise ukuthi amalunga omphakathi waseMandeni aphila impilo ebafanele nabayithakaselayo. Kufanele siqinisekise ukuthi sibuyekeza inqubo esavumelana ngayo ukuze siqinisekise izindlela zokusebenza ngaphakathi eMkhandlwini,’’echaza.
Eqhuba ukuchaze njengento emqoka kakhulu ukubaluleka kokuthi kuqinisekiswe ukuthi izinsiza ziyafinyelela kubantu ngaphandle kwenkinga.
Uthe: “Kuzodingeka ukuthi sibhekane ngqo nalolu hlelo lokuguqula izimpilo zabantu. Kuzomele sithathe izinqumo ezizoholela ekutheni uMkhandlu waseMandeni ubalwe neminye yehamba phambili.’’
Ngesikhathi sekuvalwa lo mbuthano uMeya uKhansela Mdlalose uphonsele inselelo bonke abantu baseMandeni ukuba basebenze ngokukhulu ukuzikhandla lokhu ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi le ndawo iba ngengcono kakhulu.
“Kuzomele sazi futhi siqonde ukuthi manje sesiya ngasesiphethelweni sesigaba sethu sehhovisi. Ngakho ke kumqoka kakhulu ukuba siqhubeke nokusebenza ngokuzikhandla. Eqinisweni nje sesisalelwe yizinyanga ezimbalwa zehhovisi. Ngakho ke kumele nakanjani siqinisekise ukuthi sisebenza ngokuphindaphindiwe kumele sifingqe imikhono ukuqinisekisa ukuthi izimpilo zabantu sizenza ngcono kakhulu,’’kuphetha uMeya uKhansela uMdlalose.
UMASIPALA UGQUGQUZELA EZOLIMO KUMPHAKATHI
IMeya yetheku ikhuza umphakathi ungalahli imfuncuza noma ekephi